ကိုဝင်းဟိန်းရဲ့ မြန်မာစကားကိုလေ့လာတဲ့ပြဿနာတွေ။- (၁) နာမ်စားများ။ (Pronouns) | White Boy Learning Burmese
ကိုဝင်းဟိန်းရဲ့ မြန်မာစကားကိုလေ့လာတဲ့ပြဿနာတွေ။- (၁) နာမ်စားများ။ (Pronouns)
December 18, 2012 by Win Hein	7 Comments
Spanishစကားကိုလေ့လာတုန်က နာမ်စားတွေအကြောင်း သင်လို့ရခဲ့ပါတယ်။ အင်္ဂလိပ်စကားအားဖြင့် နာမ်စားများက အရမ်းလွယ်ကြပါတယ်။
You; Ye (အခုတော့ ဘယ်သူမှ အဲဒီစကားလုံး မသုံးကြပါဘူး။)
He, She, It; They
ကြည့်ပါဦး။ အဲဒီစကားလုံးတွေကိုသုံးတာ အရမ်းလွယ်ပါတယ်။ ဒါအကြောင့် ဗမာစကားကိုလေ့လာစခဲ့တဲ့အခါ ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တာက အားလုံးအရမ်းဆင်ပါတယ်။
ငါ၊ ကျွန်တော်၊ ကျွန်မ၊ ကျွန်ှပ်။ ငါတို့၊ ကျွန်တော်တို့၊ ကျွန်မတို့၊ကျွန်ှပ်တို့
သင်၊နင်၊မင်း၊ချင်ဗျား၊ရှင်။ သင်တို့၊ နင်တို့၊ မင်း၊ခင်ဗျားတို့၊ရှင်တို့
သူ၊သူမ။ သူတို့၊ သူမတို့
Europeanဘာသာစကားပြောတတ်တဲ့လူမျိုးတွေ အားလုံးထင်ကြတာက အဲဒီ အစိတ်အပိုင်း အားလုံးစုံဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်နေ့မှာ မြန်မာဆိုင်ဝင်သွားခဲ့ပြီး အဒေါ်တစ်ယောက်က “ဪ အန်ထီ လာ လာ လာ လာ လာ အန်ထီ လာ လာ လာ လာ သားရယ်။ သားရော လာ လာ လာ လာ လာ…”လိုပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် စဉ်စားခဲ့တာက ဘာဖြစ်လို့ သူမ “အန်ထီ”လို့ “ကျွန်မ”ရဲ့နေရာတွင်ဆက်ပြောနေတာလဲ။ အဲဒီစက္ကန်းမှာ ကျွန်တော် မှတ်မိခဲ့တာက ဘုန်ကြီးတစ်ပါးနဲ့စကားပြောချင်ရင် သူတို့ကို ဘုရားလို့ ခေါ်ရ။ စဉ်စားခဲ့တာလည်း ဒီလိုဆို… အားလုံးမှာ ထူးခြားတဲ့နာမ်စားများရှိလင့်မယ်။ အဲဒီအချိန်တုန်က မြန်မာစကားရဲ့ နာမ်စားများ နဲ့ အင်္ဂလိပ်စကားရဲ့ နာမ်စားများသိပ်မတူတာ သိပြီ။
တစ်ခါတစ်လေ ဒီ အစိတ်အပိုင်းပိုလွယ်ပါတယ်။ ဥပမ…
အမျိုးသားတစ်ယောက်နဲ့စကားပြောနေပြီး ယဉ်ကျေးချင်တာပေမယ့် အရမ်းမယဉ်ကျေးချင်ဘူးရင် သူကို ညီ(လေး)၊ အကို၊ သို့ ဦး(လေး)လို့ခေါ်ရတယ်။
ဒါပေမယ့် ဒီအတွင် ပြဿနာရှိပါတယ်!
တစ်နေ့မှာ မြန်မာလူမျိုးကောင်မလေး တစ်ယောက်နဲ့စကားပြောပြီး သူမကို အမလို့ခေါ်ခဲ့တယ်။ (သူမ အသက်ပိုကြီးတယ်နော်။) အဒါ့အကြောင့် သူမစိတ်ညစ်သွားပြီး ဟိတ် ဝင်းဟိန်းနဲ့ သိပ်မခင်ပါဘူး။ အမလို့ မခေါ်နဲ့ မကြိုက်ဘူးနော်လို့ပြောခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော် ဝမ်းနည်းခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အမေရိကန်လူမျိုးတွေ ယဉ်ကျေးချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ အပြင်မှာ မတွေ့ရသေးပေမယ့် ကျွန်တော့် စကားတွေဖြင့် သူမကို ခင်တဲ့ခံစားတွေပေးချင်ခဲ့တာပဲ။ ကျွန်တော်တို့ “သိပ်မခင်”ရင် ဘယ်သူမှာ ကိစ္စရှိတာလဲဟင့်??!? သူမမှာပေါ့။ အဲဒီက ကျွန်တော်သင်ယူတာက မြန်မာလူမျိုးတွေကို ဒီနာမ်စားများ အဓိပ္ပယ်ကြီးကြီးမာမာဖြစ်ကြပါတယ်။ အဲဒါ့ အကြောင့် သတိရှိလို့ရပါတယ်။
ဒါပေမယ့် တစ်ချို့လူတွေ နားလည်မှုပိုများရှိလို့ရမယ်။ တစ်နေ့မှာ ဆရာမ တစ်ယောက်နဲ့စကားပြောပြီး အဲဒီအချိန်မှာ ကျွန်တော် မသိသေးတာက သူမ ဆရာမဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဟာ ကျွန်တော်တို့ စကားစမြည်ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါ်____ ကျွန်တော်ကို လက်ခံတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျား။ ကျွန်တော့် နာမည် ဝင်းဟိန်း လို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျား။
တွေ့ရတာ ၀မ်းသာပါတယ်။ အသက်ကြီးသူကို ခင်ဗျား.. လို့ မပြောရပါ။ ကျမက ဆရာမ.. မို့ ဆရာမ လို့ ခေါ်ရပါတယ်။ မင်္ဂလာပါရှင်။
ဘာဖြစ်လို့… အားးးးးးးး ဘာဖြစ်လို့တစ်ချို့လူတွေ ကျွန်တော် မြန်မာကိုလေ့လာနေတဲ့တခြားလူမျိုး ဖြစ်တာ နားမလည်နိုင်ကြဘူးလဲ။ အဲဒါ့ဆိုတာ
ကျွန်တော် သူမ ဆရာမ မသိသေးရင် သူမကို ဆရာမလို့ခေါ်လင့်ဘယ်လို့သိမလဲ!?
အသက်ကြီးသူကို ခင်ဗျားလိုမပြောရတာပေါ့! ဆရာမကို သင်၊နင်၊သို့ မင်း လို့ခေါ်ရင် ပိုမှန်မလား။ မပိုမှန်တော့ဘူး!
ထားပါတော့… အဲဒါ့နောက် ဘာမှ မစဉ်စားနိုင်ပါဘူး။ တာ့တာ့ ခင်ဗျားတို့!
7 thoughts on “ကိုဝင်းဟိန်းရဲ့ မြန်မာစကားကိုလေ့လာတဲ့ပြဿနာတွေ။- (၁) နာမ်စားများ။ (Pronouns)”
ဟဟဟဟ.. ဟုတ်ပါ့ မြန်မာစကားမှာ နာမ်စားတွေက အရှုပ်ဆုံးပဲ။ တကယ်တော့ ကိုယ့်ထက်ကြီးသူကို အစ်မလို့ခေါ်တာ မှန်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တချို့တွေက ငယ်ချင်ကြတယ်လေ ဟီးဟီး အဲ့တော့ အစ်မခေါ်ရင် မကြိုက်ချင်ဘူးပေါ့ 😛 😛 ဆရာမပြောတာတွေတော့ သိပ်နားမလည်ဘူး။ “ကျွန်တော့်နာမည် ၀င်းဟိန်းလို့ ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျာ” (အဲ့မှာ ၀တ်စနှစ်လုံးပေါက် “း” မပါဘူး) အဲ့လိုပြောတာမှန်ပါတယ်။ သူ့ကို “ခင်ဗျား”သွားခေါ်တာမှ မဟုတ်တာ။ အဲ့ဒါကို သူက ဘယ်လိုသဘောပေါက်နေလဲ မသိဘူး LOL xD
နာမ်စားဆိုမှ ၀င်းဟိန်းကို အရင်ကနာမည်မသိတော့ ဘယ်လိုခေါ်ရမယ် စဉ်းစားနေတာ။ ခုသိပြီဆိုတော့ ၀င်းဟိန်းပဲ ခေါ်တော့မယ်။ ၀င်းဟိန်းက ငယ်တယ်ဆိုတော့ ကိုဝင်းဟိန်းလို့ ခေါ်စရာမလိုဘူးပေါ့။ ၀င်းဟိန်းဆို ဖြစ်တယ် ဟဲဟဲ ဒါကကြုံလို့ ပြောပြသွားတာ 😛 ကန်ဒီ့ကိုတော့ အစ်မခေါ်ချင်လည်း ရတယ် (အပေါ်မှာရေးထားတဲ့ ကောင်မလေးလို စိတ်မဆိုးပါဘူး :P) နာမည်ခေါ်ချင်လည်း ရတယ် သဘောပါ ^_^
Mostly if i am meetingastranger, unless i’m definitely sure that she’salot younger than me, i would go with “အစ်မ”, showing my respect. Later on when you get friendlier, she’s would ask you to call what she likes. “အကို” “အစ်မ” is the safest way to go, as plural “အကိုတို့ အစ်မတို့”.
လာလာရဲ့စကားတွေအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးပြုပြီး နောက်တစ်ခါမှာ မြန်မာလိုရေးပါဦး။ အဲဒါကြောင့် လေ့ကျင့်လို့ရမယ်နော်။ 🙂
၀င်းဟိန်းအသုံးပြုတဲ့ စကားလုံးတွေက မမှားပါဘူး… သူတို့ဘက်က မှားနေတာနေမှာပါ… ကန်ဒီပြောသွားသလိုပဲ… မသိသေးတဲ့သူကို (ကိုယ်ထက်လဲ ငယ်တာမသေချာဘူးဆိုရင်) အစ်မလို့ခေါ်တာမှန်ပါတယ်…. ဒါပေမဲ့ တစ်ခါတစ်လေမှာ ခင်မင်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ စိတ်ဆိုးတဲ့ပုံမျိုးနဲ့ နောက်တာလဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်… ဒါမှမဟုတ်ရင်တော့ သူမက ငယ်ချင်နေတာဖြစ်မှာပေါ့…
ဆရာမဆိုတာကတော့ နားမလည်ဘူး…. “ခင်ဗျာ” ဆိုတာက သူ့ကို နာမ်စားသုံးခေါ်တာမှမဟုတ်တာ… စာကြောင်းအဆုံးမှာ ယဉ်ကျေးတဲ့သဘောမျိုး အပိတ်အနေနဲ့သုံးတာပဲ… သူမြန်မာစကားသိပ်မတတ်လို့ဖြစ်မယ်… စိတ်မညစ်နဲ့…. မဗေဒါနဲ့ ဂျီတော့မှာ စကားလာပြော စိတ်ဆိုးဘူး… 😀
May Thu Thu Zaw
မိန်းကလေးဆိုတိုင်း”သူမ” ဆိုတဲ့အသုံးလေးက စာဖတ်သူကိုဖတ်ရတာ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး မဖြစ်စေပါဘူး ကိုဝင်းဟိန်း “သူ” ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်း ကိုပိုသုံးသင့်ပါတယ်။ ဒါကလည်း” မြန်မာစာ မြန်မာစကား”ဆို တဲ့ တီဗီ အစီအစဉ် မှာဖော်ပြထားပါတယ်၊ လေးလေးနက်နက်သုံးစရာမလိုတဲ့နေရာတွေမှာ ဆိုလျှင် သူ ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းက စာဖတ်ရတာပိုပြီးပေါ့ပါးစေပါတယ် ပြောတဲ့နေရာမှာလည်း ပိုပေါ့ပေါ့ပါးပါးဖြစ်စေပါတယ်၊ နားထောင်ရတဲ့လူအတွက်လည်း ပိုအဆင်ပြေစေပါတယ်။
သဒ္ဒါအရမှန်ပေမယ့် “သူ” အသုံးအနှုန်းက သာ လျှင် ပိုသင့်တော်ပါတယ်၊
ကျွန်မလည်း နိုင်ငံခြားဘာသာစကားလေ့လာနေသူတစ်ယောက်ပါ။ ဘာသာစကားတွေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဘာသာစကားကို ခုလို့စိတ်ဝင်တစား လေ့လာတဲ့အတွက်လည်း လှိုက်လှိုက်လှဲလှဲကြိုဆိုပါတယ်။
ရှေးက မြန်မာစကားမှာ သူမ ဆိုတာ မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကိုလိုနီခေတ် အင်္ဂလိပ်စာလေ့ကျင့်ခန်းစာအုပ်တွေမှာ he (သူ) she (သူမ) လို့ သဘောပေါက်လွယ်အောင် သုံးပြရင်းကနေ တွင်ကျယ်လာတာလို့ ဖတ်ဖူးပါတယ်။ တချို့ သဘောမကျ ကြပါ။ လက်တွေ့ စကားပြောရင်တော့ သူမ ဆိုတာ အဆင်မပြေသလို သုံးလေ့မရှိပါဘူး။ နဂိုကမှ မြန်မာစကားမှာ မရှိခဲ့တာကိုး
I know , I know . You know I ‘ learning English too. Sometime I scare about being impolite.Actually you didn’t mean being wild.It happens to anybody who are learning foreign language. It also happens to me. Oh! MY GOD what’s wrong? I’ll never be good at english. But just keep moving .You ‘ll be good at burmese. Right now you speak better burmese than I do.Good Luck!